pls write your days at RIT. I hope your group had very happy memory at there.
မသီတာက RIT ခေတ်ကပေါ့နော်။ ကျွန်မလည်း အဲဒီကျောင်းဖက်အလည်ရောက်ဖူးတယ်
မသီတာက ဒေးတက်တာဆိုရင်တော့ ဂျီဟော မနေဖူးဘူးပေါ့နော်။ ရေးပါဦး ကျောင်းတော်
ဘယ်အရာနဲ့ မှ မလဲလှယ်နိုင်တဲ့ ရွှေရောင်နေ့ ရက်တွေ… နှစ်ယောက်ကို သိတော့ နာမည်လေးတွေပေးပုံကို သဘောကျမိတယ်… ချစ်စရာ အရွယ်က အဖြူရောင်လေးတွေကို ထပ်ရေးပါဦးလား မ တို့ ရယ်…
မယ်သီတာ. ဖျာလိတ်နတ် ကမှန်တယ်နော်။ တို့ ဂျပန်မလေး ခုထိ အပျိုကြီး ....ကြားရင် ငါ့ကို သတ်ချင်မှာ..